Ladnaanta daawaynta * Baxnaaninta ugu Gaarka ah Adduunka
5* Soo-noqoshada Fayodhawrka Raaxada
Guuleystaha Guud : Dib-u-habaynta Sanadka 2022. Aqoonsiga shaqadeena gaarka ah, heerarka guusha muddada fog, tas-hiilaadka raaxada iyo qiimaha.
5 *Dib u-noqoshada Fayodhawrka raaxada
Ladnaanta xallinta kaliya maahan ka baxsanaya nolosha walaaca, niyad-jabka, balwadda ama gubasho. Waa u soo laabashada nolol wanaagsan.
Meesha raaxada qallafsan ay la kulanto xorriyadda daweynta. Meel lagu xidho wax ka weyn naftiisa. Meel gaar ah oo loogu talagalay kuwa kartida leh, hal-abuurka leh, geesinimada leh iyo hal-abuurka leh si ay dib ugula xiriiraan naftooda. Meel bogsiin maskaxeed iyo jidheed oo qurxoon.
La imow qalbi furan, oo bixitaanku waa is beddeleen. Tani waa soo kabasho leh ujeedo. Meel loo socdo oo macne leh. Kani waa DAAWADA
Remedy Wellbeing run ahaantii mid gaar ah iyo barnaamijka heerka aduunka waxa ka mid ah waayo aragnimada soo kabashada sida doonteena gaarka ah, waran-kaluumaysiga, neefsiga & tacaburrada qoyska ee dhulalka fogfog, dhamaantood waxa ay ku buuxaan 5* raaxo oo qurux badan.
Guuleystaha Guud: Dib-u-habaynta ugu Fiican ee Gaarka loo leeyahay 2022
Ma waxaad joogtaa heer aad ogtahay in noloshaadu ay tahay inay isbedelaan? Ma waxaad raadinaysaa nabad badan, qancin iyo dareen ujeedo? Ladnaanta xallinta ayaa jirta si ay kaaga caawiso inaad hesho xasillooni iyadoo loo eegayo qiyamkaaga ugu sarreeya, wax kasta oo qiyamkaas ay yihiin. Bixinta Caalamka daawaynta ugu raaxada badan ee shucuureed, jireed iyo maskaxeed. Remedy Wellbeing waxay taageertaa arrimo kala duwan oo ay ka mid yihiin ku-tiirsanaanta, walaaca, hurdo la'aanta, niyad-jabka, gubasho, dhaawac, maaraynta miisaanka, soo celinta orthomolecular iyo joojinta sigaarka.
Cadaadiska & Gubashada
Barnaamijka Kobcinta Nolosha
Gubashada fulinta iyo hal-abuurka ganacsigu waxay badanaa keentaa is-daawaynta daba dheeraatay sida dareenka gooni-goosadka, cabsida, welwelka, miyir-beelka iyo niyad-jabka ayaa ka sii daraya. Daalka shucuureed ee lagu lammaaniyo waxqabadka oo yaraada, dareen la'aan, feejignaan daciif ah, is-eedaynta iyo hurdo la'aanta ayaa ah calaamado soo noqnoqda.
Ka Soo Kabashada Gudaha
La imaad maskax furan, oo bixitaanku waa is beddeleen. Tani waa soo kabasho leh ujeedo. Meel loo socdo oo macne leh. La siiyay heerka Baxnaanaynta Raaxada, oo lagu aqoonsaday natiijooyin muuqda. Waxaan aaminsanahay in ka soo horjeeda balwadda ay tahay isku xirnaanta. Isku xidhka nafta, dadka kale, deegaankayaga iyo caalamkaba.
REMEDY waxaa loo qaabeeyey inuu yahay barnaamijka ugu horumarka badan Caalamka. Ma raacayso nidaam 12-tallaabo ah. Fayoobi waaraya iyo caafimaadku waxay u baahan yihiin dhiirigelin, barnaamij daawaynta si gaar ah loo habeeyey iyada oo ka maqnaanshaha aan la qorin ama aan la dalban. Daawaynta waxay ku hagtaa macaamiisha inay u noolaadaan nolol si waafaqsan qiyamkooda.
Hal macmiil : Hal barnaamij
Remedy Wellbeing waa abaal-marin ku guulaysata, bixiye daawayn gaar ah oo daawaynta shaqsi ka-ka-fool ah ee gubashada, niyad-jabka, balwadda, welwelka iyo welwelka caafimaadka shucuureed. Daawaynta hadal-haynta ee hoyga gaarka ah iyo meelaha gaarka ah ee ugu sarreeya adduunka.
15 Sano Caddeyn Saynis ah
Our Tijaabada DNA-da ee caadiga ah waxay caawisaa go'aaminta daawaynta shakhsi ahaaneed ee shakhsi ahaaneed. Waxaan tijaabineynaa koox ka kooban 69 hiddo-sideyaal raadinaya tilmaamayaasha qabatinka, cilladaha niyadda iyo xaaladaha nafsaaniga ah. Waxaan falanqeyneynaa in ka badan 300 oo taxane ah, 24 neurotransmitters, iyo hormoonno kala duwan si aan u gaarno daaweynta Caawinta Daawada.
Soo Celinta Kiimikada Noolaha
Soo kabashada gacanta
Tijaabooyinkeena shaybaadhka ee u heellan waxay daaha ka qaadayaan arrimaha ay ka mid yihiin isku dheelitir la'aanta asiidhyada amino, yaraanta nafaqada, hypoglycemia, caabuqa, daalka adrenal, caafimaadka mindhicirka, heerarka hoormoonka iyo neurotransmitters. Daawadu waxay sunta ka saartaa oo hagaajisaa dhaawaca maskaxda iyo jidhka gaadhay heerka gacanta iyo si looga hortago cudurrada iyo cudurrada mustaqbalka.
Raaxo + Qarsoodi
Lagu abaalmariyay heerka 'Dunida ugu Fiican'
REMEDY Wellbding waxa lagu qiimeeyay Nambarka Kowaad sanadka 2022 ka dib u habeynta aduunka ugu fican waxaana shaki la'aan ah dib u gurashada ugu qaas ah uguna raaxada badan aduunka. Barnaamijka waxaa ku jiri kara barnaamij gaar ah oo dib u midoobid oo lala yeesho macmiil iyo qoyskooda oo lagu soo dhaweeyay doonteenna 125ft ah si ay ugu shiraacdaan tacaburrada sixirka ee agagaarka jasiiradaha aan la degganayn.
Daawaynta Caawinta Maskaxda
Psilocybin, Infusions Ketamine iyo Ibogaine oo caafimaad ahaan la ilaaliyo ayaa safka hore kaga jira daawaynta caafimaadka dhimirka waxayna caddeeyeen inay waxtar u leeyihiin daawaynta niyad-jabka, CPTSD, walaaca iyo balwadda. Raaxadayada Tripnotherapy™ dib u gurashada si daawayn ah ayaa loo hago oo caafimaad ahaan loo maareeyaa.
Ku guulaysta dib u habaynta ugu Fiican Adduunka 2022
Remedy Wellbeing waxa lagu qiimeeyay Nambar XNUMXaad ee Worlds Best Rehab Magazine oo aan shaki ku jirin waa ta ugu guusha badan, gaar ah iyo waayo-aragnimada Baxnaaninta ee raaxada leh ee Adduunka. DAAWAYNTU waa meesha aad ka heli doonto shaqaalaha ugu fiican, farsamooyinka daawaynta ugu hormoodka badan & habab cilmiyaysan oo dhamaystiran oo lagu taageerayo laguna barkinayo bukaanka iyada oo loo marayo metamorphosis ee soo celinta dhamaystiran.
Maxay dadku sheegayaan
"Rugtan cajiibka ah ayaa badbaadisay noloshayda. Shaqaaluhu waa dad xirfadlayaal ah waxaanan ogaa in aan ku jiro gacmo ammaan ah. Runtii uma mahadcelin karo Dhammaan kooxda REMEDY ee noloshayda beddelay. Dawaynta shaqayntu waxay runtii iga caawisay inaan fahmo sida cuntadu ay saamayn toos ah ugu leedahay niyadayda. Waad ku mahadsan tahay REMEDY. Waxaad saameyn weyn ku yeelatay noloshayda iyo ganacsigayga."
"Khibrad cajiib ah"
“Cajiib. Maxaa kale oo aan dhihi karaa. Waxaan u maleeyay in Rehab uu galayo waayo-aragnimadii ugu xumayd abid, aad baan u naxay. Laakiin REMEDY gabi ahaanba way ka duwan tahay. Barnaamijkii online-ka ahaa runtii wuu i caawiyay ka dibna waxaan qoyskayga la ballansaday laba toddobaad oo buuxa. Erayadu ma sharraxaan mahadnaqayda. Waxaad ii soo celisay noloshaydii iyo qoyskaygii.
"Nolosheyda dib ii soo celi"
"Waxaan ka tagay REMEDY maanta gabadh gabi ahaanba ka duwan oo hadda naftayda isku eegi karta muraayadda, waxaanan bilaabay inaan jeclayn oo kaliya laakiin jeclahay naftayda. Tani waxay hoos ugu dhacday shaqaalaha cajiibka ah. Sinaba meesha uma eedayn karo. Maareyntu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa la macaamilka macaamiisha taas oo keenta farqi weyn. Waxaan rajeynayaa mar kale nolosha"
"Daryeel iyo xirfadle"
"Adiga oo ah dhakhtar dhimirka oo diiwaangashan oo ku takhasusay balwadaha, khalkhalka cunnada, iyo daaweynta dhaawacyada, ma ku talin karo XAWIN fayoobaanta aad ugu filan. Shaqaalaha xirfada leh iyo kuwa aqoonta u leh waxay bixiyaan kor iyo wixii ka dambeeya si ay u taageeraan macaamiisha. Waxaan u gudbiyay tiro ka mid ah macaamiishayda daaweynta bukaan-jiifka ee REMEDY waana sii wadi doonaa. "
Wararka, Dhacdooyinka & Xarunta Aqoonta
Remedy Wellbeing waxay ku faraxsan tahay inay wadaagto fikirka hadda jira iyo hoggaanka warshadaha. Kooxdayada waxaa badanaa loo yaqaan "khubarada khubarada" waxaana si joogto ah ugu yeera Dowladaha, NGO-yada, Ururka Caafimaadka Adduunka iyo Rugaha kale ee Yurub iyo Adduunka oo dhan oo raadinaya inay dejiyaan, la qabsadaan oo beddelaan siyaasadda caafimaadka maskaxda ee hadda jirta.
Dhaqancelinta ugu Fiican Adduunka ee 2022
Faahfaahinta La Helay
Xuquuqda daabacaadda 2022 ee Volania LLC, Inc. Dhammaan Xuquuqaha way xifdisan yihiin.